किन खनिए किशोर नेपालविरुद्ध महिला अधिकारकर्मी !
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका दिन अर्थात् शुक्रबार वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखे, ‘बाको नाम खुलाउन नसक्ने आमाले छोराछोरी किन जन्माउनु ? आमा एक्लैले छोराछोरी जन्माउन सक्ने त होइन । सेक्स पार्टनरको नाम बताउन नचाहनेका लागि मेरी स्टोप्सका क्लिनिक देशभरि छरिएका छन् त ! नवजात शिशुको ललाटमा बिनाबाबुको छोरो किन लेखाउनु ?’
आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्काचर्की बहस भइरहेका बेला पूर्वसम्पादक नेपालले गरेको ट्वीटमा महिलाहरू यसरी खनिए कि कतिपयले निकै तुच्छ गालीसमेत दिएका छन् ।
नेपालको ट्वीटमाथि करिब डेढ सय जनाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिउत्तरमा सबैजसोले असहमति जनाएका छन् ।
ट्वीटरमा नागरिकता सम्बन्धी नै अर्को एउटा ‘सिटिजनसिप अन सेल’ (नागरिकता बिक्रीमा) भन्ने ह्यासट्याग समेत चर्चित छ । जन्मका आधारमा नागरिकता दिनुलाई आपत्तिजनक भनिएको छ । एउटा समूहले ह्यासट्याग #CitizenshipOnSale? समेत बनाएका छन् ।
अधिकारकर्मीले कुनै पनि नेपाली महिलाले आफूले जन्माएको बच्चालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । बुबाको नाम बताउन नचाहेमा करकाप गरिनु नहुने उनीहरूको माग छ । कुनै पनि आमाले बाबुको नामबिनै नागरिकता बनाउन पाउनुपर्ने माग महिला अधिकारकर्मीको छ ।
नेपालको ट्वीटको टिप्पणी गर्दै क्यानडा निवासी लेखिका मञ्जुश्री थापाले लेखिन्, ‘आइएम सरी... तपाईंलाई बुझ्न असमर्थ भएकोमा । यो कुनै लिंगको मात्रै कुरा होइन, हरेक नागरिकका मानवअधिकार र समानताका सामान्य सिद्धान्तका विषय हुन् । ह्वाट अ सक् !’
थापाको प्रतिउत्तरमा नेपालले जवाफ दिए, ‘म त अहिले पनि उदार समाजको समर्थक हूँ । तर, मलाई तपाईं नेपालको यत्रो पिछडिएको समाजलाई के भन्नुहुन्छ, जहाँ बाको पहिचान नभएको शिशु जीवनभर अपमानित हुन्छ । नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको समाज हो । यहाँ परिवर्तन क्रमिक हुन्छ । अहिलेसम्म त्यही देखिएको छ ।’
बिब्ल्याँटो हेन्डलबाट एक जना कानुन व्यवसायीले लेखेका छन्, ‘नागरिकता बाउ वा आमाको निगाहले दिने होइन, संविधानमा तोकिएको योग्यता पुगेको नागरिकले कार्यविधि कानुनले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम पाउन तोकिएको निकायमा आवेदन गर्ने हो र योग्यता पुगे नपुगेको परीक्षण गरेर जारी गर्ने हो ।’
आमाको नामबाट नागरिकता विषय धेरैअघि देखि नै विवादित बन्दै गएको छ । नेपालमा जन्मेका तर, बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको नाममा वंशजको नागरिकता दिने संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति बनेको छ ।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमै जन्मेकाले नागरिकता दिने गरी सहमति भएको हो । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेकालाई बाबुको नामबिनै नागरिकता दिन पाउने गरी व्यवस्था गरेको हो । तर, बच्चाको बाबु भएࡣ÷नभएको भन्ने विवरण अभिलेखमा राखिने गरी उल्लेख छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलकै क्रममा छ । नागरिकतालाई वैज्ञानिक बनाउन अभिभावकको अनिवार्य सनाखत गर्नुपर्ने निर्णय बिहिबारको बैठकले गरेको छ ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने वा गरेकी विदेशी महिलालाई नेपाल आएको कति समयपछि नागरिकता दिने भन्ने विषय विवादित बन्दै गएको छ । विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा संविधानले उल्लेख गरिसकेको छ । तर, कानुन बनाएर दिने भन्ने व्यवस्था अनुसार कति समयपछि अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने विषयमा सांसद्हरूले मत जुटाउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ’ भन्ने लेखिएको छ ।
ट्वीटरमा जान याे लिंकमा जानुहाेस् :
बाकाे नाम खुलाउन नसक्ने अामाले छाेराछाेरी किन जन्माउनु? अामा एक्लैले छाेराछाेरी जन्माउन सक्ने त हाेइन । सेक्स पार्टनरकाे नाम बताउन नचाहनेका लागि मेरी स्टाेप्सका क्लिनिक देशभरि छरिएकाछन त । नवजात शिशुकाे ललाटमा 'बिना बाबुकाे छाेराे' किन लेखाउनु ?
— Kishore Nepal (@kishorenepal) March 8, 2019
राजस्व छली गर्ने कर्मचारीलाई ५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले भन्यो : त्रिवि सेवा आयोग खारेज होस्
'छाया मन्त्रीमण्डलको कार्यकाल २०-३० वर्ष रहोस्' : नेकपा सांसद बस्नेत
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग
नेपाली भाषामा एकरूपता ल्याइने
शेयर बजार थप सुधारोन्मुख